Lamba lamban'ny efitra fatoriana mafana, lamban'ny efitra fatoriana mafana, Shina Lamba lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba malefaka mpanamboatra, mpamatsy, orinasa - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
FANCY DECORATION & PREMIUN QUANLITY - Miaraka amin'ny endrika tsy manam-paharoa sy avo lenta, ny ridao mainty dia hampamirapiratra ny haingon-trano ary hamorona rivo-piainana milamina ho an'ny efitrano rehetra amin'ny fotoana rehetra. Ny lamba mihitsy no iray amin'ireo fitaovana malaza indrindra eran-tany. Miaraka amin'ny endrika kanto, manome rivo-piainana milamina sy mampahazo aina ny efitrano. Ny fitaovana dia 100% polyester, afaka manakana ny hazavana 85% -93% sy ny taratra UV.
FAHAZAVANA FAHAZAVANA & INSULATION THERMAL EXCELLENT – . Ny lanjan'ny lamba dia avy amin'ny 200gsm ka hatramin'ny 320gsm. Izy ireo dia tena malefaka sy mahafinaritra ny mikasika. Fanampiana tonga lafatra ho an'ny efitrano fatoriana, efitrano fandraisam-bahiny, efitranon'ny ankizy sy ny sisa. Fitaovana voafantina amin'ny kalitao, tsy misy moron-tongony, ary fanaraha-maso kalitao henjana ho an'ny traikefa vokatra tsara kokoa.
Namboarina avy amin'ny lamba Super Soft 100% kalitao avo lenta (Polyéster, Import). Umi pensilihazo pleat blackout curtains dia mateza sy mahafinaritra ny mikasika. Ny lamban'ny Triple Weave Blackout Technology dia fitaovana maivana sy mikoriana miaraka amin'ny sosona miafina manokana izay manakana ny hazavana ho an'ny torimaso milamina. Noho izany dia azo antoka fa tsy hanelingelina ny olona any ivelany.